Kafaalo oo raashiin Zaakatul-fitr ah qaybisay
Waxaa hay’adda Kafaalo- iyadoo yoolkeeda uu yahay inay muslimiinta la qaybsato munaasabaadka farxadda- u qaybisay raashiinka Zakaatul-fitr ilaa 240 qoys oo kamid ah qoyasaska ugu saboolsan magaalada Kismaayo.
Waxaa raashiinkan loo qaybiyey masaakinta deggen saddex xero oo kamid ah xerayaha qaxootiga ee ku yalla magaalada Kismaayo. Lacagta lagu gaday raashiinka loo qaybiyey masaakintan, waxaa bixiyey markaska Norrköping Islamiska Center ee ku yaalla magaalada Norrkjøping ee dalka Sweden.
Hay’adda Kafaalo waxay raashiin dhan 125 jawaan oo bariis ah (oo u dhigma 6250 kiilo) u qaybisay 240 qoys oo sabool ah. Waxaa qoys walba kusoo aaday 25 kiilo oo bariis ah oo u dhigma fitriga 10 qof.
Kafaalo iyadoo ka faa’iidaysanayso khibradaheeda raashiin qaybinta ayaa waxay dooratay inay raashiinka ku qaybiso saddex goobood oo kala duwan si aysan u dhicin shilalka ka dhasha isciriirinta iyo isriixidda marka raashiinka la qaybinayo taaso marar badan oo hore dhacday, iyo inay raashiin qaybinta ku aadisay waqtiyada munaasibka ah sida inta u dhaxaysa fajarka iyo salaadda ciidda.
Sidoo kale waxay Kafaalo u qaybisay raashiin zakaatul fitr xarunta dadka dhimirka ka xanuunsanaya ee magaalada Garoowe. Raashiinka dadkaasi loo qaybiyey ayaa gaarayey 19 jawaan oo bariis ah. Waxaa ka faa’iidaystay ilaa 115 qof.
Dadkani ka faa’iidaystay raashinka la qaybiyay waxay muujiyeen farxadooda, waxayna u mahadceliyeen una duceeyeen walaalahood usoo diray fitriga kana farxiyey maalinta muslimiinta oo dhan ay farxayaan.
Tirada Martida: 4054 - Update ugu danbeeyay: 07-08-2014
Visits: 698729 | :::::